Vohitr’ Andriana eto Imerina Samy itoeran’ny hasim-piandrianana avokoa
Revy Glita Glita Namelona indray ny hira be mpankafy fahiny
“Revy Glita,Glita” indray no nanamarika ny seho takarivan’ny Piment Café tetsy Behoririka ny zoma alina lasa teo. Seho niarahana amin’ny mpanakanto telo manana ny talentany eo amin’ny fitendrena gitara sy eo amin’ny sehatry ny hira.
Manala azy vita bacc Ho hentitra ny fidirana
Hiditra amin’ny andiany faha-26 ankehitriny ny hetsika Manala azy vita bacc miaraka amin’ny mpanakanto Olombelo Ricky.
Faha-15 taonan’ny RDJ Hivazo ny tsara indrindra ry Ambondrona
Ny jolay 2003 no nahenoana voalohany ny onjam-peon’ny tanora na RDJ. Nanamafy ny fanazavany toy ny tamin’ny 15 taona lasa ny filoha tale jeneralin’ity onjam-peo ity, Tahiana Rasolojaona na Jay Taxx, omaly, tetsy amin’ny Le pave Antaninarenina.
Resaka vako-pirenena Mila arovana ny tononkalo ankehitriny, hoy ny mpikaroka
Nitombo iray indray ny dokotera momba ny literatiora eto Madagasikara.
Ivondronan’ireo fokom-pianakaviana misy eto Imerina ny hasin’Imerina fa tsy voafehy amina vohitra na fokom-pianakaviana iray.
Maro isa ireo fokom-pianakaviana eto Imerina raha tsy hitanisa afa-tsy ny Hova sy ny Manendy, ny Zaza manga sy ny Mainty enin-dreny ary ny Andriana sy ny Manisotra. Ireo vohitr’Andriana no itoeran’ny Hasim-piandrianana saingy samy manana ny hasiny ihany koa ireo fokom-pianakaviana rehetra. “Ireo fokom-pianakaviana Andriana sasany amin’ny ankapobeny no manimba hasina ireo fokom-pianakaviana misy, amin’ny fanindrahindrana ny hasin’izy ireo na manambara mihitsy aza fa azy ireo na ny toerana misy azy ireo ihany ny hasin’Imerina”hoy ny mpitahiry ny hasim-piandrianan’i Madagasikara ao amin’ny tranoben’ny Merina Ambohimanga Robert Randrianantoandro.Notsindrian’ity Andriana ity fa“Tsy misy azo tsinontsiniavina ireo fokom-pianakaviana rehetra misy eto Imerina ary samy manana ny hasiny itambarany amin’ny foko Merina”. Tsy ireo andriana rehetra anefa no voasahana ao anatin’izay fanivaivana fokom-pianakaviana hafa izay, fa ireo izay nanary ny fomba sy ny finoana maha-Gasy azy. Raha fehezina, tsy misy fokom-pianakaviana na vohitra iray afaka miteny fa izy ireo ihany no hasin’Imerina, toy izany koa ireo vohitr’Andriana rehetra misy eto Imerina dia samy itoeran’ny hasim-piandrianan’ny Merina avokoa.